Unilorin Remedial Portal www.remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php: Akụkọ Schoollọ Akwụkwọ Ugbu a
Unilorin Remedial Portal www.remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php Mmelite kacha ọhụrụ
Unilorin Remedial Portal: Nke a bụ iji gwa ndị agadi niile na ụmụ akwụkwọ na-achọ ịba uru na Mahadum Ilorin na-agba ọsọ.
Ibe akwukwo a gha enye gi uche banyere ihe ichere na Portal. Ọzọkwa, ọ ga - eduzi gị otu esi enweta ọnụ ụzọ ma melite ya mgbe ewepụtara ndepụta nnabata. Agbanyeghị, tupu oge ahụ, gịnị mara banyere Unilorin?
Ya mere, ụmụ akwụkwọ niile nke ụlọ akwụkwọ na-aga usoro mmezi nwere ike ịrụ ọrụ agụmakwụkwọ dị mkpa site na ọnụ ụzọ ahụ.
Mahadum nke Ilorin (Unilorin)
Mahadum Ilorin a makwaara Unilorin. Ọ bụ mahadum gọọmentị etiti nwere na Ilorin, Kwara State, Nigeria. Ọzọkwa, e guzobere ya site na Iwu nke Gọọmentị ndị agha Federal na August, 1975. Ọ malitere na 1975 dị ka Mahadum University. mmekọ na Mahadum nke Ibadan.
Ntọala ahụ iji mejuputa otu n'ime iwu mmụta nke Atọ Mbido Mba nke Atọ. Ebumnuche nke a iji nyekwuo ohere maka ndị Naijiria na-achọ inweta agụmakwụkwọ mahadum.
Ozokwa, o bu iweputa ndi mmadu di elu, di oke mkpa maka onodu aku na uba ngwa ngwa. Agbanyeghị, ma e jiri ya tụnyere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị ọzọ dị elu na mba ahụ, ụlọ ọrụ ahụ nwere otu ala kachasị ukwuu na-ekpuchi ihe dịka hekta 5000.
Mkpa Portal Unilorin Dị Mkpa
The Unilorin mgbapụta Portal emere maka ndi ochie na ndi n’acho akwukwo nke Mahadum. Ọzọkwa, ọ bụ iji mepụta akaụntụ ma ọ bụ banye iji rụọ ọrụ agụmakwụkwọ ụfọdụ dị mfe. Ihe Nlereanya:
Nbanye Portal Unilorin
Mahadum Ilorin (UNILORIN) Enwere ike ịnweta ọnụ ụzọ nbanye ịbanye ụmụ akwụkwọ site na njikọ dị n'okpuru:
Ntinye akwụkwọ Unilorin: https://remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php
UNILORIN Ntinye Ntinye Nkwenye
Nchịkwa nke Mahadum Ilorin (UNILORIN) na-akpọ ndị chọrọ ka ha banye na mmemme mmezi. N'okpuru bụ ụfọdụ n'ime isi ihe achọrọ:
1. Arts na Arts Mmụta:
Ndị anamachọ ihe ga-agafefe isi ise na ọkwa kredit na ihe karịrị oche abụọ. Nke a dịkwa na SSCE / GCE nke WAEC, NECO, NABTEB haziri. Ọzọkwa, nke a kwesịrị ịgụnye isi isiokwu nke ọmụmụ.
Agbanyeghị, rịba ama na akara mmụta kredit na Asụsụ Bekee na mgbakọ na mwepụ bụ iwu maka ịnabata mmemme ọ bụla na Mahadum Ilorin.
Ọzọkwa, abụọ n'ime isiokwu ise ahụ ga-abụrịrị Arts. Ọ bụ ezie na isiokwu ndị ọzọ nwere ike ịbụ site na Social Sciences.
Mara: Enweghị usoro mmemme na BA (Hons.) Bekee
2. Ọrụ Ugbo, Injinia na Teknụzụ, Sayensị Gburugburu Ebe obibi, Sayensị na Sayensị Sayensị, Mmụta Teknụzụ na Teknụzụ Mmụta
Ndị na-achọ ajụjụ ga-agafe isiokwu ndị a na ọkwa kredit: Asụsụ Bekee, Ọgwụ, Ọgwụ, Mgbakọ na Mgbakọ na Mgbakọ na NOT karịa oche abụọ na SSCE / GCE nke WAEC / NECO na NABTEB haziri.
UNILORIN Ntughari Mmemme Oge
Ihe omume a bụ oge nke ọkara nke abụọ (otu agụmakwụkwọ).
Ọnọdụ General Programme
Kọmitii nke ,lọ Akwụkwọ, na usoro iwu ya nke itinye aka na agụmakwụkwọ mahadum, akwadola na ndị na-enyocha akwụkwọ nwere kredit gafere na ise (5) O 'Ọkwa ma enweghị ụkọ nke asụsụ Bekee ma ọ bụ Mgbakọ na mwepụ nwere ike itinye maka mmemme ahụ.
Agbanyeghị, ọ bụrụhaala na ha ga-edebanye aha maka ma nweta akara kredit na isiokwu a ga-atụle maka nnabata na mmemme nzere.
Ọzọkwa, ndị mmeri ndị chọrọ ịmụ injinịa ga-enwerịrị akara ugo mmụta na kredit, mgbakọ na mwepụ na physics wee nọdụ ala asụsụ bekee, kemistri, mgbakọ na mwepụ na physics na JAMB / UTME.
Tụkwasị na nke a, ndị mmeri ga-ede JAMB / UTMEnwere usoro isiokwu dị mkpa na mmemme ọ bụla na Arts ma ọ bụ sayensị. Ga-enwetakwa nke kacha nta nke Mahadum UTME kwadoro nkebi.
Ntụle maka ịbanye na mmemme ga-adabere na arụmọrụ na oke maka mmemme ọ bụla.
Ọzọkwa, ụmụ akwụkwọ gafere thelọ akwụkwọ na njedebe nke usoro ihe omume ahụ mana ha enweghị ike ịnweta akara nkwụsị kacha nta nke JAMB / UTME nke mahadum kwadoro nwere ike BANK nsonaazụ Ntugharị maka iji n'afọ na-esote naanị.
Agbanyeghị, enyere nke a na a ga-enweta opekata mpe akara JAMB / UTME nke akwadoro maka afọ na-esote.
Ọzọkwa, ndị ntinye akwụkwọ ga-arịba ama na mmemme ahụ bi.
Ebe nke UNILORIN ịgba akwụkwọ omume
Ebe mmemme a ga-abụ na thelọ Akwụkwọ nke Mbido Mmụta, Fufu, Ilorin South Local Government Headquarters, Kwara State. Dị ka ndị dị otú a, ndị ntinye akwụkwọ ga-arịba ama na mmemme ahụ bụ ebe obibi.
Etu esi lelee Ndepụta nnabata UNILORIN
Banye na ọnụ ụzọ gị (https://remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php.). Agbanyeghị, jiri Nọmba Ngwa Remedial gị mee nke a. Ihe Nlereanya: UIL / REM / 2018 /…, na paswọọdụ gị iji lelee ọnọdụ nnabata gị.
Ọ bụrụ na ị nabatara oge, mejupụta fọm nnabata na a EGO ANA NA-EGO EGO EGO N’AKA nke Puku Puku Naira (N10,000). Nke a Ọ B .GH. bụ akụkụ nke ụgwọ ụlọ akwụkwọ.
Site na ozi ndị a dị n'elu, ekwenyere m ugbu a ị matakwuola banyere mmemme Unilorin. Agbanyeghị, hụ na ị kesara ndị enyi a ozi a.
UNILORIN Admission Portal www.uilugportal.unilorin.edu.ng/ Mmelite kachasị ọhụrụ
Mahadum Ilorin Nbanye 2020 Lee Mmelite Ntinye Ngwa Ọhụrụ
Lelee FUGUSHUA Onye Ntinye Aka na Ndozi 2020/2021 Download PDF List
Nhazi na mmejuputa iwu nke komputa eji eme ihe banyere komputa
Tinye Ugbu a maka Federal University Dutse Job oghere maka onye na - edeba aha - 2016
CRUTECH Post UTME Nyocha Nsonaazụ 2020/2021 Oge Nkuzi
Lelee FUOTUOKE Freshers Usoro Mmemme Usoro Oge 2017/2018 Online
Tags: esi lelee ndepụta nnabata unilorin, Mkpa nke ọnụ ụzọ mmezi nke otu ihe, ntinye nnabata nke uzo ozo, ọnụahịa mmezi nke unilorin, Nbanye Portal nbanye Portal, oge ịgwọ ọrịa na ịpụ iche, Mahadum Ilorin, ebe a ga-eme mmemme mmezi
« PricewaterhouseCooper Mbanye maka Onye Isi Nchịkwa 2021
PricewaterhouseCooper (PwC) Mbanye maka ndị nchịkwa nchịkwa nchịkwa nke 2021 »
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii na 2021/2022
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii Nigeria 2021/2022 Guide Portal Guide
Agụmakwụkwọ na Mahadum VERITAS | Ndepụta nke usoro ọmụmụ e nyere
NPF Nbanye Portal Nbanye www.policerecruitment.ng 2021/2022 Kacha ọhụrụ na Mmelite
UNILORIN Ntughari / Ntinye akwụkwọ nnabata 2021/2022 Portal Session
7 Umu akwukwo kacha mma na Germany maka umu akwukwo India 2021
Ihe omumu Google na ndi ozo di iche ichoro maka 2021